Shirweynaha Shabakadda Warbaahinta Soomaaliyeed (Network 2013) oo Muqdisho ka Furmay – STAR FM SOMALIA
Shirweynaha Shabakadda Warbaahinta Soomaaliyeed (Network 2013) oo Muqdisho ka Furmay
Star FM: Waxaa maanta ka furmay Shirka u dhaxeeya Shabakada 2013 kaasi oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah warbaahinta Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya uu ka furmay Hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas’uuliyiinta 29 Idaacadood oo ku yaalla gobollada dalka,waxaana uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah.
Gudoomiye ku xigeenka Shabakada 2013 ahna agaasimaha guud ee idaacadda Risaala Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi ayaa sheegay u jeeda shirka uu yahay sidii ay isku wareysan lahaayeen xubnaha qeybta ka ah ururka.
Waxa uu sheegay shirkaan in uu socon doono muddo saddex cisho ah ,islamarkaana la filaayo in lagu doorto hogaanka shabakada ,madaama hogaankii hore waqtigu ka dhamaaday.
Shabakada 2013 ayaa ah Shabakad warbaahineed oo ay ku mideysan yihiin warbaahinta ku taala muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Dagaalka Balad Weyne iyo fatahaadda Wabiga oo Dad Badan ay ku Baro kaceen